२०७८ कार्तिक ७ आइतबार ०८:०७:००
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दशबुँदे सहमति भनेर एमालेमै बसेका नेताहरूको स्थिति बिजोग भएको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीको सिन्धुपाल्चोक–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अन्तिममा एमालेमै बस्ने नेताहरूलाई केपी ओलीले मानमर्दन गर्न थालेको बताए । ‘आदेशको पालन गर्‍यो भने स्याबास बस्न पाउँछ । पालना गरेन भने कति ट्याउँ–ट्याउँ गरेको दशबुँदेको भन्ने सुन्नुपर्छ । सुन्नुभयो कि भएन, दशबुँदेको ट्याउँ–ट्याउँ । दशबुँदे भन्ने साथीहरूको कस्तो हरिबिजोग । कुनै मर्यादा छैन, कुनै सम्मान छैन, छलफल छैन,’ उनले भने ।
अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी अन्य पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जाने योजनामा रहेको दाबी गर्दै आगामी निर्वाचनमा केपी ओली गुटलाई समाप्त पार्ने दाबी पनि गरे । बागमती र प्रदेश १ मा छिटै नयाँ सरकार बन्ने उनले बताए ।
बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा र प्रदेश १ मा यही साता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अध्यक्ष नेपालले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो दल र एमाले चौथो दल भएको उनले बताए । केपी ओलीले ठूला गफ दिने गरेको बताउँदै उनले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने प्रसंग कोट्याए ।
को–अर्डिनेसन केन्द्र स्थापना गर्ने नेताहरू समाजवादी पार्टीमै रहेको दाबी गर्दै नेपालले आफ्नो पार्टी नै मूल धारको कम्युनिस्ट पार्टी रहेको जिकिर गरे । ‘यो पार्टी अरूले बनाएको होइन, हामीले बनाएको हो । दाबाका साथ भन्दै छु, ३१ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्रको अपिल जारी गर्ने वेलामा कहाँ थिए यी व्यक्तिहरू ? पोलिटब्युरो, केकको घोषणा गर्दा ? त्यतिवेलाका योद्धा मुकुन्द न्यौपाने, झलनाथ खनाल अहिले पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ । म स्वयं तपाईंहरूको साथमा छु ।’
ओलीको 'टाङमुनि छिरेर बस्ने' की सन्न्यास लिने भन्ने भएपछि नयाँ पार्टी गठन : नेपाल
अध्यक्ष नेपाल भन्छन्– योगाभ्यास गरे मात्र शरीर स्वस्थ हुन्छ
एमाले गैरकम्युनिस्ट आचरण भएकाहरूको पार्टी हो : नेपाल
सर्वोच्चको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहुन्छ : अध्यक्ष नेपाल